च्यास्मिटार चिनारी : ‘सबैको उन्नति बाटो, घर–घरमा उद्यमी, समृद्धको पाटो’ « Tuwachung.com
१. ‘वेल एजुकेटेड’ नगर उपप्रमुख
२. झरी पर्दै छ, नेकपा प्रवेश चल्दै छ
३. तुवाचुङ साप्ताहिकद्वारा ६ जनालाई ‘फुल स्करलसिप’
४. ७७ वर्षअघि ५ रुपैयाँमा बनेको घर
५. सुनथला बन्दै नुनथला
६. ५० तस्बिरमा बुङालुङ (रकगार्डेन)
७. सोल्टिनीले धोका दिएपछि १८ वर्ष ब्रिटिस आर्मीमा
८. मंगलटार हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकै सम्पन्न वडा
९. यसरी लेख्न सकिन्छ थेसिस (पाठ १ देखि २९ सम्म)
१०. शिक्षकले गल्ती गर्दै नगर्ने होइन
११. अक्षर राम्रो भएकाले पत्रकारितामा जागिर
१२. सिडियो कुट्ने लाहुरे
खेलमैदानमय खोटाङ : जिल्लाका लोभलाग्दो १२ खेलमैदान
च्यास्मिटार चिनारी : ‘सबैको उन्नति बाटो, घर–घरमा उद्यमी, समृद्धको पाटो’
भलाराज राई	२०७७ भाद्र २७, २१:३९
‘लिखितं पूर्वै नं ३ नम्बर, मौजै थुं
हलेसी माझ किरात’
लगभग एक सय वर्षअघि व्यावहारिक लिखतमा समेत यसरी लेखिने/चिनिने च्यास्मिटार हिजोआज हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ भएको छ । च्यास्मिटारको पश्चिममा बाहुनीडाँडा र डिकुवा, पूर्वमा बडहरे र दुर्छिम, उत्तरमा दूधकोसीका साथै दक्षिणमा सुनकोसी बगिरहेको छ ।
च्यास्मिटारको क्षेत्रफल २१७१ वर्गकिलोमिटर रहेको छ । वडाभित्र ५४५ घरधुरी र तीन हजारजति जनसंख्या छन् । यहाँ राई, क्षेत्री, विश्वकर्मा, परियार, भुजेल र एक घर माझीसमेत बसोवास गर्छन् । च्यास्मिटारका वडावासी सबैले निर्वाध रूपमा आ–आफ्नो रीतिरिवाज र धर्म–संस्कृति मनाउँदै आएका छन् ।
वडावासीमध्ये केही सरकारी तथा गैरसरकारी जागिरे भए पनि अधिकांश किसान छन् । यहाँका मुख्य बाली मकै हो । तर, वातावरण प्रदूषणका कारण जलवायु परिवर्तन भइरहँदा बर्सेनि उत्पादनमा ह्रास आउन थालेको छ । परम्परागत खेतिपातीबाट उपलब्धि नहुने भएपछि यहाँका दुई सयजनाजति युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक पुगेका छन् ।
च्यास्मिटारका पूर्वाधार विकासको कुरा गर्दा सामान्य रूपमा ग्रामीण सडक निर्माण भएको छ । अन्य पूर्वाधार विकासका साथै ज्येष्ठ नागरिक, महिला, एकल महिला, दलित, लोपोन्मुख र अपांगता भएकाको पहिचान गरी आवश्यक कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ ।
मुलुक समृद्ध बन्न समुदाय समृद्ध हुनुपर्नेमा दुईमत छैन । समृद्धको पहिलो सर्त नै आर्थिक विकास हो । तर, परम्परागत कृषिमा बर्सेनि ह्रास आउँदा किसान चिन्तित छन् । नेपाल कृषिप्रधान देश भएकाले कृषि क्षेत्रको विकासविना कुनै पनि स्थानीय तह समृद्ध बन्न सम्भव छैन । त्यसैले वडामा वैकल्पिक खेतीका लागि अध्ययन अनुसन्धान हुन जरुरी भएको छ । केही युवा बिदेसिए पनि गाउँघरमा रहेका बेरोजगारी युवाले योग्यताअनुसारको रोजगारी पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । विदेश जान नचाहनेले स्वदेशमै पसिना बगाउने वातावरण बनाउनु आजको आवश्यकता भएको छ ।
पूर्वाधारकै कुरा गर्दा प्रत्येक टोलमा सडक सञ्जाल विस्तार हुनुपर्छ । सरकारी वन सामुदायिकमा परिणत भए पनि वन–जंगल पातलिँदै गएका छन् । जन्मदेखि, विवाह, व्रतबन्ध, मृत्युसम्मलाई पनि दाउरा चाहिने भएकाले अवैज्ञानिक ढंगबाट रूख कटान हुँदा वन–जंगल पातलिँदै गएको हो ।
त्यसमाथि वन–जंगलभन्दा सडक निर्माणलाई बढी प्राथमिकता दिइँदा परम्परागत वन–सम्पदा नाश भइरहेको छ । यसकारण जंगल खहरेमा परिणत हुने देखिएको छ । यसका लागि छिटोभन्दा छिटो कार्ययोजनासाथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कुनै पनि विकासका लागि अर्थतन्त्र पहिलो सर्त हुने भएकाले अर्थोपार्जनको प्रमुख स्रोतका रूपमा पर्यटनलाई लिनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि पर्यटक आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ । कार्ययोजना बनाएर पर्यटक भित्र्याउने कसरत गर्नुपर्ने भएको छ । विकासका दिगोपनका निम्ति आवश्यकता हेरी बर्सेनि, पञ्चवर्षीय गुरुयोजना बनाउनुपर्छ ।
नेपालको संविधान–२०७२ को अनुसूची ८ ले दिएको स्थानीय अधिकार अवलम्बन गरी नीति निर्माण गर्न स्थानीयले जनप्रतिनिधिलाई सहयोग गर्नुपर्छ । प्रत्येक टोलमा घरेलु उद्योग सञ्चालनका लागि स्थानीय पनि उत्सुक बन्नुपर्छ । यहाँका प्राकृतिक, भौगोलिक स्रोत साधन उपयोग गरी उद्योग तथा कलकारखाना सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न ढिला गर्नुहुँदैन ।
सबैले आवश्यकताअनुसार उद्यमी बन्नुपर्छ । ‘सबैको उन्नति बाटो, घर–घरमा उद्यमी, समृद्धको पाटो’ हुनुपर्छ ।
(लेखक हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–३ च्यास्मिटारका वडाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
Latest posts by tuwachung (see all)
खेलमैदानमय खोटाङ : जिल्लाका लोभलाग्दो १२ खेलमैदान - September 29, 2020
अर्घाखाँची भनेर हिँड्दा राँची पुर्याइदेलान् है ! - September 29, 2020
न त रवि लामिछानेजस्तै बन्ने भूत चढ्यो - September 29, 2020
झरी पर्दै छ, नेकपा प्रवेश चल्दै छ
झरी पर्दै छ । नेकपा प्रवेश गर्नेको लहर उत्साहजनक चल्दै छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–२
आज जुसले काम चलाउनुस्, भोलिदेखि पानी व्यवस्था गरौंला
बेइजिङमा जस्तै सुचाउमा पनि चिनियाँहरू पानीभन्दा सुप, जुस र बियर धेरै खाएको देखिन्थ्यो । हाम्रो
५० तस्बिरमा बुङालुङ (रकगार्डेन)
हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थान खोटाङमा रहेको ककनीडाँडामा बुङालुङ (रक गार्डेन) बन्न लागेको छ । ५६
नेपाली भाषा र नेपालबारे जान्ने मौका
गएको शरदयाम मेरा दसजना साथीसँग नेपाल गएँ । हाम्री गुरुआमा हरिताजी पनि हामीसँगै गएकी थिइन्
संसारमा सबैभन्दा छिटो दौडने जनावर चितुवा हो । जसले ६ सेकेन्ड ८ पल्समा १०० मिटर
अर्घाखाँची भनेर हिँड्दा राँची पुर्याइदेलान् है !
उपमेयरज्यू बिस्तारै जानुहोस् । अगाडि खाल्डाखुल्डी छन् । हलेसी तुवाचुङ नगररोहणको यात्रामा निस्कनुभएको तपाईं बिमला
न त रवि लामिछानेजस्तै बन्ने भूत चढ्यो
‘तिमी पत्रकार भएर के गर्यौ ? पत्रकार भनेको त रवि लामिछानेजस्तो हुनुपर्छ,’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा